Iles Eparses Miditra an-tsehatra diplaomasia parlemantera
Marc Ravalomanana “Tsy voafehy ny valanaretina, hafenina ny marina”
Nivoaka tamin’ny fahanginany sy naneho ny heviny indray momba ny zava-misy eto amin’ny firenena indrindra fa ny fitantanana ny ady amin’ny Covid 19 ny filoha teo aloha
Antenimieram-pirenena Misy depiote voan’ny Coronavirus
Miaka-dapa eny amin’ny Antenimieram-pirenena ny valanaretina Covid-19 ary efa misy solombavambahoaka voa.
HCJ Feno ny fepetra hiasany…
Ny Solombavambahoaka Tsabotokay Honoré, voafidy tao Vohipeno, no lany ho filohan'ny Vaomiera manokana misahana ny fiampangana manoloana ny Fitsarana Avo (HCJ), omaly teny amin'ny CCI Ivato.
Famerenana ireo nosy manodidina Tsy afa-manapaka irery ny filoha Macron
Sarotra ny fandidiana momba ny famerenana ireo nosy manodidina an’i Madagasikara amin’ny Malagasy rehefa alalinina ny lalampanorenana frantsay sy ny toeran’ny filoham-pirenena frantsay, Emmanuel Macron, ao anatin’ilay toe-draharaha.
Raharaha Fidèle Razara Pierre Lasa mampifanolana ny samy olon’ny Filoha
Tsy atao fialokalofana ny maha olom-boafidy ary tsy natao hanafenana ny hadalana ny fitantanan-draharaham-panjakana, ka hitadiavana ny irika rehetra hamorehana ny fitondrana mahefa ao anatin’ny fahefana mpanatanteraka,
Governemanta Minisit­ra vavy iray voatery mihiboka
Mihanaka ny tsimok’aretina covid-19. Efa tonga eny anivon’ny biraom-panjakana sy ministera eny amin’izao fotoana izao.
Amiraly Didier Ratsiraka Hanahirana ny marary hotsaboina any an-trano
Misy zavatra diso tsy mifanaraka amin’ny tantara, ka aleo hitsiana dieny mbola velona aho, hoy ny Amiraly izay nanazava zavatra maro tamin’ny fandarahana nataony tamina fahitalavitra iray omaly alina. Isan’izany ny nilazany fa tsy nanana olana tamin’ny Kolonely Ratsimandrava, ary efa izy no noresahina voalohany handray ny fahefana saingy nolaviny.
x ny amin'ny hametrahana ny nosy Glorieuses ho valanjavaboaharim-pirenena dia nanambara ny filohan` ny Antenimieram-pirenena fa “minia mandray fanapahan-kevitra azy manokana na décision unilatérale ,tsy niaraha nidinika tamin'ny fitondram-panjakana Malagasy ny frantsay raha manao izany. Tsy hanaiky mora foana izany anefa ny mpitondra tenin'ny vahoaka izay solon'ny solombavambahoaka tena.”. Raha tsiahivina dia efa nisy didim-panjakana noraisin` ny fanjakana frantsay mahakasika ireo nosy ireo ary nolaniana ihany koa tao anivon` ny parlemanta frantsay izany. Raha ny fizotran` ny raharaha dia miroso amin` ny diplaomasia parlemantera ny fifampiresahana. Azon` ny parlemantera Malagasy atao amin` ny alalan` ny birao maharitra no mandefa taratasy any amin` ny parlemanta frantsay na hatramin` ireo parlemanta “francophone”. Andrasana izay ho paikadin` ireo depiote raha hisy tolon-dalàna arosony. Hatreto aloha dia tsy mbola misy daty mazava ny amin'ny fifampidinihana faharoa voatondro fa tokony hatao any Frantsa. Nanova zavatra maro ihany koa moa ny fisian'ny valanaretina Coronavirus maneran-tany.